Yiziphi izindlela ezingcono kakhulu zokwandisa isakhiwo sewebhu se-SEO?
Umklamo wewebhusayithi yingxenye ebaluleke kunazo zonke ebusweni bakho be-intanethi njengoba kuyinto yokuqala okuyiyo amakhasimende akho angayibona uma elandela isizinda sakho. Umklamo wewebhusayithi usebenza njengekhadi lebhizinisi lebhizinisi lakho. Cabanga ukuthi unikeza abalingani bakho bebhizinisi namakhasimende ibhazinesi elikhishwe ngamakhasimende futhi elibi elingenalo ulwazi olululwazi.
Kungenzeka ukuthi bangathanda ukuyeka ukubambisana nawe. Isimo esifanayo singase senzeke emkhakheni we-intanethi lapho izivakashi zakho zewebhu zenza isinqumo esekelwe kwisici esibukwayo sesayithi lakho kanye nokuqukethwe okubanika zona. Uma ungathanda ukwenza isakhiwo sakho sewebhusayithi njenge-generator ehamba phambili kunazo zonke, umbuzo othi "Kanjani ukwandisa isayithi ye-SEO?" Mhlawumbe ukuxwayisa.
Iqiniso litshelwe, le nkinga ayikwazi ukuphendulwa yinoma ubani ngaphandle kwezivakashi zakho, futhi bayayenza ngezindlela ezihlukahlukene. Ukuze uqonde ukuthi yini amakhasimende akho angase ayifunayo, udinga ukuba nethuluzi lokuhlaziya elilungile. Leli thuluzi kufanele likunikeze kokubili idatha yekhwalithi nobuningi mayelana nesipiliyoni sakho sesisayithi sakho somvakashi. Ngakho-ke, ukuze uthuthukise isakhiwo sakho sewebhusayithi futhi wenze kube lula ngomsebenzisi, kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani abasebenzisi beza kusayithi lakho kuqala.
Kulesi sihloko, uzothola amaqhinga okusebenza okuklama ukuklama kanye nezindlela zokuhlola ukuthi kungenzeka kanjani ukuthengwa kwamakhasimende akho ekuvuseleleni kabusha kwakho.
Izindlela eziphumelelayo zokuhlelwa kwewebhusayithi yakho
Kunamasu amaningi angapheli okudingeka uwacabangele uma uthuthukisa umthombo wakho wewebhu. Noma kunjalo, singakwazi ukuhlukanisa izinto ezintathu ezibalulekile okufanele zibe yingxenye yazo zonke izingosi:
Ukuthumela imibiko ephelele
Zonke lezi zakhi ze-SEO zingathuthukisa kakhulu ukusebenzisana nomsebenzisi wakho webhusayithi futhi zikusize ukuba uhlangabezane nezinhloso zebhizinisi lakho. Kulesi sigaba, uzothola okunye okusemqoka ukuthi ungakghona kanjani ukuklama isayithi lakho ukuheha amanye amakhasimende angakwazi ukukwenza kanye nemali engenayo.
Kumelwe nakanjani ukwandise isakhiwo sakho sesayithi ukwenza kube lula ukuhamba nokukhangisa. Ngenkathi uthuthukisa ukuklama kwakho, qaphela njalo izivakashi zakho zamasayithi. Njengabasebenzisi, isipiliyoni kuyisici esibalulekile se-Google. Amakhasimende akhona kufanele akwazi ukuhamba ngokuphumelelayo emakhasini ewebhu ukuze athole ulwazi oludingayo. Kuzovimbela izivakashi zakho ukuba zingapheli futhi zinciphise izinga lokunciphisa iwebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, ukuhlelwa kwekhwalithi nokusetshenziswa komsebenzisi kufanele kube nokwakha ngokufanele ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kufinyeleleka kalula yizivakashi.
Namuhla, ukuhlelwa kwegridi kuyathandwa phakathi kwabakwa-webmasters njengoba behamba kahle nezimo. Imishini yegridi ethile ihlanganisa uhlelo lokuphendula, uhlelo lwe-Grid ye-960, i-Bootstrap 3 namanye amathuluzi wekhwalithi. Lezi zinhlelo zivumela abakhi bewebhu ukuba bakhe imiklamo yesayithi ehleliwe kahle futhi elula.
Njengoba i-Google iwazisa amawebhusayithi aphendulayo eselula futhi ayithatha njengesici sokubala, udinga ukuba nomklamo wewebhusayithi ophendula kuwo wonke amadivayisi weselula. Yonke into ebalulekile ye-website kufanele ihlelwe ngokugcwele ukuze ivumelane nokulinganiselwa kwezikrini zeselula. Ngaphezu kwalokho, udinga ukushiya isikhala phakathi kwezinkinobho nemisebenzi kuhlu ukuze uvumele izivakashi zakho ziqonde kalula isayithi lakho kusuka kuma-smartphones awo. Ngineluleka ukuthi ugweme noma yikuphi ukwakheka okuklanyelwe okuklanyelweyo kanye nama-pop-ups kumklamo ophendulayo ngoba awunakubonakala ngokugcwele kumakhalekhukhwini.
Ukuze wenze iwebhusayithi yakho ikhangeleke futhi isebenzise umsebenzisi, kufanele usebenzise amafonti afanele. Qinisekisa ukuthi amafonti akho asemvelo futhi afanele kunoma iyiphi isikrini. Uma kungenjalo, okuqukethwe kwakho kungabonakala kuncane futhi kungafundiwe. Isibonelo, imibhalo emitlolo emitjho emide ibudisi inqubo yokufunda njengombana iinhlamvu zihlanganisana. Ngaphezu kwalokho, ngiyeluleka ukugwema inombolo yesibalo sezinhlamvu ezinkulu njengoba kungase kubonakale kungenangqondo kubafundi.
Ukukhomba abasebenzisi ukunakekelwa kwezakhi ezibalulekile kusayithi lakho, sebenzisa izikhala ezimhlophe. Ivumela abasebenzisi ukuthi babe nekhefu kukho konke okubukwayo nokukrini okuqukethwe kwakho ngokuphumelelayo. Ngokusebenzisa izikhala ezimhlophe, uzothuthukisa isici sakho esibukwayo sekhasi. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela enhle yokwenza okuqukethwe kwakho kubonakale kumaskrini wezesayizi ezahlukene.
Cabanga ngohlelo lwakho lokubala lombala. Njengoba imibala ingathonya imizwelo yakho yamakhasimende angase ibe nemizwa, udinga ukusebenzisa imibala edibeneyo futhi ugweme izakhi eziningi kakhulu. Letha amakhasimende akho imizwa ejabulisayo ngokusebenzisa ukujabulisa imibala yombala. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisi imibala eminingi ngoba ingaphazamisa ikhasimende ekuthengeni.
Ukusekela injini yokusesha kuyisici esibaluleke kunazo zonke ekuthuthukiseni phambili kwebhizinisi njengoba kudala ithrafikhi elibhekiswe kuwebhusayithi.
i-SEO isiza ukunquma ukuthi yiluphi ulwazi oludinga ukuboniswa izethameli ezithile. Ukuthuthukisa ukuqashelwa komkhiqizo nokuphakamisa ukuguqulwa kwewebsite, udinga ukusebenzisa i-SEO. Ihlanganisa ukusetshenziswa kwamagama angukhiye, izihloko, izingqungquthela, izithombe, i-infographics, ukukhuphula amavidiyo, izixhumanisi zangaphakathi nezi zangaphandle, incazelo ye-meta nokuqukethwe. Okuqukethwe yinkosi, futhi kuyindlela engcono kakhulu yokwenza ngcono iwebhusayithi yakho ye-SEO.
Ukwenza okuqukethwe kwakho kubonakale kokubili ukucinga ibhizinisi namakhasimende akho angakhona, qinisekisa ukuthi ufaka okuhambisana kakhulu nemibandela yakho yokusesha imboni kuyo. Abasebenzisi bangathanda ukuthola ulwazi oludingekayo ekuboneni kuqala, yingakho udinga ukwenza okuqukethwe okusemqoka kakhulu kukhasi lakho kulula ukuthola. Ikhasi lakho lewebhusayithi kufanele libe lula ukuskena. Ngakho-ke, udinga ukugwema ukugxila igama elingukhiye nemibhalo ende. Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlelwe kahle futhi kufaka izinhlamvu zezinhlamvu nezinombolo, izigaba ezincane, izihloko, nemibhalo engezansi.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukugxila enjongweni eyinhloko yesayithi lakho. Udinga ukuletha isiqondiso esiyinhloko sesayithi lakho ekhasini lasekhaya ukuvumela izivakashi ukuthi yini isayithi lakho elifakiwe. Udinga ukugxila ekukhangiseni kwekhasi lasekhaya ukuze ubambe ukunakekelwa kwabasebenzisi futhi uzibandakanye ekulandeleni amanye amakhasi ukuze ujule ngesihloko.
Kunconywa ukugcina iwebhusayithi ilula futhi ingaguquki. Isakhiwo sewebhu esilula senza izivakashi zikwazi ukuhamba ngamakhasi kalula futhi kamuva zithuthukisa ulwazi lwabo. Ezweni lanamuhla, abasebenzisi nje abafuni ukuchitha isikhathi befuna imininingwane edingekayo. Bengathanda ukukuthola ngokushesha futhi kulula. Yingakho okuqukethwe kwakho kufanele kubekwe ngokuhlelekile ukuze kubonakale kuwo wonke umsebenzisi. Udinga ukugwema noma yiluphi ulwazi olungadingekile futhi unciphise inani lamathekisthi okungenani Source .